CVO nalefa any Afrika Inona no hitranga raha misy maka tahaka ?
Nanao fanambarana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 9 aprily teo fa voarara ny famoahana ny fanafody natao hitsaboana ny Covid 19 izay voka-pikarohan’ireo mpikaroka malagasy hiala ny tanin’ny repoblikan’i Madagasikara ary toy izany koa ireo zavamaniry fitsaboana nakana ny akora nanaovana izany.
Ankehitriny, iarahan’ny rehetra mahalala ny zava-misy fa nisantatra ny fisitrahana ny tambavy Covid organics na CVO ny 29 aprily teo, 20 andro monja taorian’io, ny firenena Afrikanina efa mihoatra ny folo. Nivadika tamin’ny teniny sahady, araka izany, ny filoham-pirenena. Ny tena mampanahy ao anatin’izany rehetra izany dia ny ho avin’ilay ivon-toerana nolazaina fa namokatra ity tambavy ity mihitsy dia ny IMRA izany, raha toa ka sendran’ny sanatriavina. Isan’ny firenen-kafa efa nilaza ho manana ny fanafodiny koa, ohatra, ry zareo Kaongoley sy ny Roandey. Ry zareo Senegaley moa nangataka santionany amin’ity vokatra malagasy ity. Ny vokatry ny olona izany mety tsy ho avoakany fa ny antsika kosa mety ho halalininy any an-tanindrazany any. Sanatriavina ny hoe hojeren’ireo siantifikan’ireo firenen-kafa ireo ny singa rehetra mameno io CVO io mba hahafahany manamboatra vokatra mitovy saingy ho ataony anarana hafa avy eo ahafahany mirehareha ny vokatra amin’ny anaran’ny fireneny. Antenaina fa tsy adino ny anaran’ny Papier Antemoro izay nodongian’ny Maorisianina tamin’ny fotoan’androny kanefa efa anarana malagasy hoe Papier Antemoro izao no niantsoana azy. Teo koa ny vokatra hitan’ny Profesora Zaraniaina niadiana tamin’ny aretina SIDA saingy very an-javony taty aoriana.